(Waxaa laga soo toosiyay Kimistari)
imisteri waa waxbarasho ee isdhexgalka u dhexeeya walxaha kiimikada, oo ka kooban atamka ama qayb ka subatomic kaliya:. Protons, electrons iyo neutrons Atamka isku daro si ay u sameeyaan u taagoo ama kiristaalo. Chemistry waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "sayniska dhexe". (A: sayniska dhexe), sababtoo ah waxaa isku xira dhowr cilmiga kale ee dabiiciga ah sida xiddigaha, physics, qalabka sayniska, bayoolaji iyo cilmi dhul asal ahaan Chemistry la ogan karo in jilaa ka weyn qaar ka mid ah, oo loo yaqaan alchemy, caqiido ah oo uu soo dhaqma kumanaan sano in meelo badan oo dunida ah.
Reaction kiimikada A waa beddelidda ee walxaha kiimikada in mid ama ka badan waxyaabaha kale. Reaction A waxaa loo qori karaa sida caanaha falcelin. Tirada atamka si bidix iyo midig ee isla'egta ah isbedel kiimikada ah inta badan waa loo siman yahay.
Tabar iyo entropy jira laba fikradaha aad u muhiim ah in ku dhowaad dhammaan chemistry. Walxaha kiimikada waxaa loo kala saaraa by ay qaab-dhismeedka, qaabka, iyo sidoo kale Halabuurka kiimikada ay. Waxay la falanqeeyay karo by hababka kala duwan ee falanqaynta kiimikada, tusaale ahaan, spectroscopy iyo chromatography.
Rocío Picado Herrero: A Chemistry Teacher Explains Her Faith
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimisteri&oldid=218948"
Last edited on 9 Oktoobar 2021, at 20:57
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:57.